Crispy Air Fryer French Fries (Akora 4 ihany!) - Fomba Fanamboarana
inona no mandeha amin'ny kaserôla volontany hash amin'ny sakafo hariva
akoho teriyaki miaraka amina fivarotana saosy novidina
pie cheeseburger bacon miaraka amina horonana
dibera voanjo mametaka katsaka
Crispy Air Fryer Fries Fries
Ny fries french french fries dia marikivy ary mora ampiasaina amin'ny tavy kely.
Ny mpisolovava an'habakabaka dia nanova ny fandrahoana sakafo saika ny zava-drehetra, ao anatin'izany ny fanaovana ny fries crispy frantsay tianao indrindra amin'ny fotoana fohy noho ny fandrahoana amin'ny lafaoro!
Ny antony itiavantsika ny fries amin'ny Air Fryer
Ny fryer fryer no namako akaiky indrindra! Ity fomba fahandro mora ity ho an'ny french fryer french fries an-trano dia soloina ny endasina voaendy ho an'ny hamburger tonga lafatra mpiara-miasa!
Salama kokoa noho ny sakafo haingana izy ireo (na ny fries novidin'ny magazay aza) ary manana tsiro mahafinaritra. Tena mahatsapa ho tsara kokoa aho mihinana an'ireny fries ireny!
ny rivotra fryer mivezivezy ny hafanana manodidina ny sombin-javatra tsirairay, manosihosy ny ivelany ary mamela ny ao anatiny ho tsara sy malefaka ka hahatonga azy ireo haingana kokoa noho lafaoro fanendasa .
Raha tokony hofofoina french fries lalina, ny rivotra fryer mampiasa solika ampahany ary manana fanadiovana kely koa! Na, mifikitra amin'ny ketchup taloha tsara!
Tsy misy Fryer Air ?! Tsisy olana!
Afaka mahatalanjona ianao endasina endasina crispy ao anaty lafaoro koa!
POTATOES Rosiana tsara sy starchy, izy ireo no safidiko voalohany hanome ny crisp tonga lafatra miaraka amin'ny atiny marefo.
Azonao atao ny manamboatra karazana ovy ho endasina Yukon volamena, ovy mena, na koa fries french!
mampahatsiro sakafo Menaka oliva (kely fotsiny!), Vovoka tongolo lay, ary sira voasarona izay ihany no ilaina hamitana ny tsiron'ireo fries ireo! Ny fanamainana poivam-boasarimakirana iray hafa ankafizina.
paty mangatsiaka nendasina amin'ny fryer
Ahoana ny fomba hanamboarana fries frantsay amin'ny Air Fryer
Ny fries french Air Fryer dia tena mora ampiasaina ary vonona amin'ny fotoana fohy ho an'ny tsakitsaky tonga lafatra!
Maneteza ary mandroboka mandritra ny 30 minitra ( TYPE PRO: asio siramamy bitika kely amin'ny rano ho an'ny tsiro mamy kely - trano fisakafoanana haingam-pandeha no manao an'io).
Arotsaho ny lapoaly ary esory amin'ny servieta taratasy. Atsipazo menaka sy zava-manitra mandra-pahatongan'ny paty rehetra.
Apetraho ao anaty harona fryer ny ovy ary atsofohy ao anaty fryer preheated.
Mahandro 10 minitra, ahintsano ny sobika, ary tohizo mandra-pahatongan'ny volontany volamena eo ivelany.
Manompoa fries fryer fries miaraka amin'ny chipotle aioli , voan-tsinapy , saosy cocktail , na akanjo fiompiana . Na, manandrama manao matsiro sakamalao fromazy sakay !
Ahoana ny fomba famerenanana indray
Atsofohy ny paty fryer fries frantsay amin'ny alàlan'ny fametahana azy ireo ao anaty fryer preheated mandritra ny 3-5 minitra.
Rano akoho amam-borona
Rolling atody Fryer Air
Salmon Fryer Air
Rosemary Air Fryer Wedges
Tianao ve ireo Fries Frantsay Air Fryer? Aza hadino ny mamela isa na fanehoan-kevitra etsy ambany!
Frito frantsay Fryer
Fotoana fanomanana10 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo18 minitra Mandroa fotoana30 minitra Fotoana manontolo58 minitra Fanompoana4 MpanoratraHolly Nilsson Ireo fries Air Fryer French ireo dia efa za-draharaha sy marefo ary volamena tanteraka! pirinty Pin
▢rOA ovy russet
▢1 sotrokely vovoka tongolo lay na hanandrana
▢½ sotrokely sira voasarona na hanandrana
Mikosehina ovy sy peel raha tiana. Hetezo fries ¼ '.
Apetraho ao anaty lovia lehibe ny paty ary fenoy rano mangatsiaka. Mandrosoa farafahakeliny 30 minitra.
Araraka tsara ary sasao ny lapoaly amin'ny servieta ao an-dakozia.
Afanaina aloha ny rivotra fryer amin'ny 390 ° F.
Atsipazo ovy, menaka, vovoka tongolo gasy, ary sira nohamarinina mba hanandrana.
Apetraho ao anaty harona ny ovy ary andrahoy mandritra ny 10 minitra. Ahintsano / esory ny ovy ary andrahoy 6-8 minitra fanampiny na mandra-pahatongan'ny crisp. Manisy sira fanampiny hanandrana.
Ny fries matevina kokoa dia mety mila fotoana bebe kokoa, mety ho kely kokoa noho ny fotoana kely kosa ny fries mahia. Mety miovaova ny fitaovana fa mora ny manamarina ireo endri-minitra minitra vitsivitsy mialoha ary manampy fotoana bebe kokoa raha ilaina izany. Mba hanaovana fries bebe kokoa dia mahandro andiam-bika kely kokoa. Raha vantany vao vonona hanompo ianao, ampio ny fries rehetra amin'ny harona fryer ary andrahoy amin'ny 390 ° F mandritra ny 2-3 minitra na mandra-pahafana. Atsofohy ny paty fryer fries frantsay amin'ny alàlan'ny fametahana azy ireo ao anaty fryer preheated mandritra ny 3-5 minitra.
Kaloria:148,Karbohidraty:roa-polo ambyh,Proteinina:rOAh,Tavy:7h,Tavy voky:1h,Sodium:297levitra,Potasioma:453levitra,Fibre:1h,Sugar:1h,Vitamina C:6levitra,Kalsioma:14levitra,Vy:1levitra
Teny lakileAir Fryer Fries Fries, recipe fries french fries, fofona french french tsara indrindra, fomba fanaovana french fries amin'ny air fryer Mazava ho azyAir Fryer, Appetizer, Sakafo fety, sakafon-tsakafo, sakafom-pisakafoanana masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .